Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Tonga any Royal Bahrain handray azy tsara any Grand Bahama
Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Karaiba • Cruising • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Miaraka amin'ny fampisehoana sy fankalazana mivantana an'i Junkanoo, ireo tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta sy ireo mpitarika ny orinasa lehibe dia nandray an-tanana ny Royal Caribbean International tamin'ny zoma 18 jona lasa teo, rehefa nahavita ny lanonam-pitokanana voalohany tao amin'ny Grand Bahama Island ny Adventure of the Seas, miaraka amina mpandeha mazoto 1,000.
Grand Bahamas dia mandray ny anjara toerany amin'ny toeran-trano farany vaovao mankany amin'ny Royal Caribbean International's Adventure of the Seas.
Ny fiverenan'ny fitsangantsanganana an-tsambo any amin'ny Nosy Grand Bahama dia niverina taorian'ny fiatoana 16 volana.
Mpandeha an-tsambo an'arivony an'arivony no antenaina hiakatra ao Grand Bahama ao anatin'ny 3 volana ho avy.
Taorian'ny fiatoana naharitra 16 volana noho ny fameperana fitsangatsanganana COVID-19 mifandraika amin'izany, ny fiverenan'ny fitsangantsanganana an-tsambo mankany amin'ny Nosy Grand Bahama dia manamarika fotoana lehibe iray ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana. Manamarika ny fanoloran-tena ho amin'ny famerenana amin'ny laoniny taorian'ny fanamby ara-toekarena natolotry ny fiatraikany mahery tamin'ny Rivo-doza Dorian ary avy eo niharatsy tao anatin'ny famaranana ny areti-mandringana. Freeport Harbor dia faly nanompo ho toy ny toeran-trano farany vaovao tompon'andraikitra amin'ny famatsian-tsakafo sy famahanana solika alohan'ny hiverenan'ny sambo any Nassau.
Tamin'ny famelabelarana ny teny fanamarihana tamin'ny lanonam-panokafana, ny praiminisitra, ny tena Hon. Dr. Hubert A. Minnis dia nilaza hoe: "Taorian'ny fitaintainana nandritra ny 16 volana, ny tsy fahatokisana, ny fanidiana ary ny famerana, ny olona eran'izao tontolo izao dia maniry fatratra ny hiditra any ivelany, amin'ny sisintany vaovao, tsy ho fitsoahana ihany, fa ho an'ny fanasitranana. Grand Bahama tokoa dia nahazo fahafaham-po indrindra ho fialofana amin'ny fanasitranana. Ny moron-dranomasiny, ny velaran-tany mahafinaritra ny tontolo iainana ary ny kolontsaina manankarena dia ho voan'ny balsama manasitrana an'arivony maro Fitsangatsanganana an-dranomasina mpandeha izay antenaina hiakatra ao Grand Bahama ao anatin'ny telo volana ho avy. ”
“Mino izahay fa ity tetikasa fanabeazana aizana ity dia hisy fiatraikany eo noho eo amin'ny fitomboan'ny toekarena Bahamian. Maneho ny fisaoranay tanteraka an'ireo mpiara-miombon'antoka izahay ao amin'ny Royal Caribbean noho ny fifandraisana efa ela izay maharitra 50 taona mahery », hoy ny Hon. Dionisio D'Aguilar, minisitry ny fizahan-tany sy fiaramanidina Bahamas.
Ny akaiky an'i Grand Bahama any South Florida dia manampy amin'ny toerana misy azy io ho toeram-pizahan-tany malaza ary seranan-tsambo ankafizin'ny fitsangatsanganana an-tsambo any Karaiba. Ny mpitsidika dia afaka mankafy ny tanàna faharoa lehibe indrindra ao amin'ny firenena, Freeport, izay mirehareha amin'ny trano fandraisam-bahiny ambony, toerana ara-kolontsaina sy manan-tantara manova fiainana, ary koa zava-mahatalanjona eo amin'ny tontolo iainana. Avy amin'ny fikarohana culinary, fitsangatsanganana taxi amin'ny nosy mahafinaritra ary fitsangatsanganana rano mangarahara amin'ny kristaly, ny fitsangatsanganana dia tsy misy fiafarana ho an'ny mpandeha raha eny amoron-dranomasina.
Fitsangatsanganana an-dranomasina Nanomboka ny fitsangatsanganana fito alina avy any Nassau ny 12 Jona, izay misy fientanentanana roa andro mifandimby amin'ny Perfect Day ao amin'ny CocoCay, ny traikefa nahafinaritra tao Cozumel ary andro iray fialana sasatra teny amin'ny morontsirak'i Grand Bahama fasika isaky ny sabotsy mandritra ny fahavaratra. .
Ireo manonofinofy momba ny fialan-tsasatra manaraka azon'izy ireo atao dia afaka manoratra tapakila iray eny an-tsena amin'ilay manaitaitra Fitsangatsanganana an-dranomasina. Ny fiaingana farany dia voalahatra amin'ny 11 septambra 2021. Ampirisihina ny mpitsangatsangana mba hitsidika Bahamas.com/travelupdates raha mila topimaso momba ny protokolon'ny fitsangatsanganana sy fidirana farany an'ny The Bahamas alohan'ny hamandrihana.
Miaraka amin'ny nosy sy cay maherin'ny 700 ary toerana itodiana 16 tsy manam-paharoa, ny Bahamas dia any amin'ny 50 kilaometatra miala ny morontsirak'i Florida ihany no manome sidina mora, izay mitatitra mpandeha lavitra ny andavan'andro. Ny nosy Bahamas dia manana jono, antsitrika, sambo ary kilasy an'arivony maro amin'ny rano sy torapasika mahatalanjona indrindra eto an-tany. Ny Bahamas dia fantatra fa manana rano madio indrindra eto an-tany. Mazava be fa nizara sary am-polony maro an'ireo nosy ireo astronaut NASA Scott Kelly nandritra ny fotoana nitetezany ny tany tamin'ny taona 2016. Nisioka izy fa The Bahamas no “toerana tsara indrindra avy eny amin'ny habakabaka.” Jereo ireo nosy rehetra atolotra ao www.bahamas.com na ao amin'ny Facebook, YouTube or Instagram hahitanao hoe maninona no Tsara kokoa any The Bahamas.